Malfeitona: onye na-egbu egbu onye mara mma maka atụmatụ ya | Igbu egbugbu
Okwu dị ịtụnanya nke onye na-ese egbugbu bụ Malfeitona: ọ ghọrọ onye ama ama maka atụmatụ ya jọgburu onwe ya
Antonio Fdez | | Ndị na-ese egbugbu
Mgbe ị gụsịrị isi okwu ahụ, okwu ahụ bụ "jọrọ njọ" nwere ike iyi gị oke. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na m ga-achọ okwu ọzọ ịkọwa ụdị egbugbu nke ndị onye na-egbu egbu egbugbu Malfeitona ọ ga-abụ "imebiga ihe ókè." Ọkachamara ama ama ama ama ama ama n'ụwa niile na ụbọchị ndị na-adịbeghị anya mgbe ụfọdụ atụmatụ ọ na-eme abanyela na net.
Malfeitone, akpọrọ n'ezie Helen Fernandes, ọ bụ a Onye omenkà egbugbu a mụrụ na Brazil nke ụdị ya ghọrọ ewu ewu n’ụwa niile. Onye na-ahụ maka ọrụ igwe site na ọzụzụ, ọ bụzi onye na-achọsi ike na mgbasa ozi mgbasa ozi maka ọrụ ya dị iche iche egbu egbu egbu. Agbanyeghi na eserese abughi otu n’ime akacha onyinye ya, Fernandes kpebiri itinye egbugbu n'uzo nke ya, nke mere ka ndi mba nile mata ya n'oge na-adighi anya.
Otu n'ime atụmatụ aghụghọ nke Malfeitona.
Ihe dị ka otu afọ gara aga Malfeitone Ọ na-enweghị ọrụ, ya mere o kpebiri ịchọta ihe ọ ga-ewe n'ọrụ ma kpata ego. N'otu oge ezumike, Helen malitere tụọ akpụkpọ enyi ya nwoke ma hụ nsonaazụ ya, o kpebiri iso ndị enyi ya na-emega ahụ. Maka na ihe niile dị mkpa iji mee egbugbu dị elu, n'oge na-adịghị anya ọ malitere ịkwụ ụgwọ atụmatụ ya.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya Maka ọtụtụ ndị na-ese egbugbu na ndị na-egbu egbugbu, a pụrụ ịkọwapụta atụmatụ Malfeitona dị ka ihe jọgburu onwe ya ma ọ bụ imebiga ihe ókè.. Otú ọ dị, ọnụ ọgụgụ nke ndị gaferelarị n'aka ha dị ịrịba ama. Eziokwu bụ na, ọ bụ ezie na ọ bụ nke gbara gharịị, egbugbu ya nwere akụkụ nke anụrị na ọchị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere ọrụ ha, ana m akwado ya soro na instagram Gaa Malfeitona.
Isi mmalite - Instagram
Pathzọ zuru ezu na edemede: Igbu egbugbu » Ogbugbu » Ndị na-ese egbugbu » Okwu dị ịtụnanya nke onye na-ese egbugbu bụ Malfeitona: ọ ghọrọ onye ama ama maka atụmatụ ya jọgburu onwe ya
Brooklyn Beckham na-akwụsị site na studio Doctor Woo
BAUM FEST 2017: mgbakọ mba niile na Barcelona na 20 afọ